बस दुर्घटनामा बाँचेकी नाबालिका बालिका, जो आमाबाबु खोजिरहेकी छन् तर लिन कोहि आएनन् ? - Nepali Taja Khabar
December 22, 2019 December 22, 2019 by Auther
गत मङ्सिर २९ गते सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका स्वाँरामा १५ जनाको ज्या’न जाने गरी भएको बस दुर्घटनामा बाँचेकी सात महिनाकी बालिका बेसहारा बनेकी छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
बालिकाले केही खान नमानेपछि एक साताअघि सुत्केरी हुनुभएकी सुनकोसी गाउँपालिका–७ की सुनिता माझी अस्पताल पुगेर आफ्नो दूध चुसाउने गर्नुहुन्छ । दुर्घटनामा परेकी यी बालिकालाई सिन्धु सदाबहार अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो । उपचार सकेपछि पनि कोही अभिभावक हुँ भनेर बालिकालाई लिन नआएपछि अहिले अस्पतालको संरक्षणमा राखिएको छ ।
बा। ४ ख ४४६८ नम्बरको मिनीबस दुर्घटनामा परी बाँच्न सफल यी दूधेबालिका अझै एक्ली छन् । बालिकाको नाम के हो रु कसैलाई थाहा छैन । उनका बाबु कहाँ छन् रु जानकारी छैन । आमाको सोही दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अस्पतालले नै बालिकाको रेखदेख गर्दै आएको छ । बोतलको दूध खान मान्दिनन् र उनलाई अन्य खानेकुरा खुवाउन पनि सकिएको छैन । बालिकाको स्वास्थ्य राम्रो रहेको बाल स्याहार कक्षमा राखिएको उक्त अस्पतालका नर्स लक्ष्मी विकले जानकारी दिनुभयो । नानीलाई आमाले दिने मातृत्वअनुरूप नै स्याहारसुसार गरेको नर्स विकले बताउनुभयो । अस्पतालका डा। राजकुमार दङ्गालले भन्नुभयो, “बालिकाको उचित हेरचाह र पालनपोषण भइरहेको छ । ”
इलाका प्रहरी कार्यालय बाह्रबिसेका प्रहरी निरीक्षक नवराज न्यौपानेले बालिकाको आफन्त हौँ भनेर केही व्यक्ति आए पनि प्रमाण नपुगेकाले दिन नसकिएको जानकारी दिनुभयो । बालिका उक्त दुर्घटना भएको बसका चालक सुमन तामाङकै छोरी भएको न्यौपाने बताउनुहुन्छ । चालक तामाङ अहिलेसम्म फरार छन् । तामाङको घर सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० भएको प्रहरीले बताएको छ ।
Prevआमा-बुबा दुवै ‘पोइला’ गए : भाइ-बहिनीको जिम्मेवारी १४ वर्षिया अनिताको थाप्लोमा !
Nextकोठा न्यानो पार्न मकल बालेर सुतेका दुई महिने बालक सहित आमाको निधन
‘छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा’का गीतकार शुक गुरुङको नि’धन